The Irrawaddy's Blog: အင်းစိန်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့၏ တောင်းဆိုချက်
အင်းစိန်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတို့၏ တောင်းဆိုချက်
တောင်းဆိုချက်မူရင်းစာ၁။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု (က) အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူရန် Refer မရရှိခြင်း (ခ) အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆေးဝါးမရရှိခြင်း ၂။စာအုပ် ၊ စာစောင်ဖတ်ရှုခြင်း(က)စာပေ စီစစ်ရေး ခွင့်ပြုပြီးသော စာအုပ်စာစောင်များ ထောင်တွင်း တွင်ထပ်မံ စီစစ်ရေး ပြုလုပ်နေခြင်း၃။အ၀တ်အစား(က)ထောင်မှထုတ်ပေးသောပုံစံဝတ်စုံများမှာ လူ့သိက္ခာနှင့်မလျော်ညီစွာ ၀တ်ဆင်လို့ မရအောင် သေးငယ်နေခြင်း၎။လျှော့ရက်ခံစားခွင့် (က)အကျဉ်းထောင်လက်စွဲဥပဒေအပိုဒ် (၈၃၈) နှင့် (၈၄၈) တို့အရ ခံစားခွင့်ရှိသော သာမန်လျှော့ရက်နှင့်အတူ လျှော့ရက် (အထူးလျှော့ရက်များကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ထောင်တာဝန်ခံအရာရှိ စသည်တို့မှပေးနိုင်ကောင်း) စသည့်လျှော့ရက်များကို သီးသန့် ၊ သာမန်သီးသန့်အကျဉ်းသားများမှ ခံစားခွင့်မရှိခြင်း ထို့အတူ ကျွန်တော်တို့ (လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာတွင်မပါပဲ ကျန်ရှိသော) သီးသန့် ၊ သာမန်သီးသန့် အကျဉ်းသားများအား အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးတို့တွင် တတ်စွမ်းသမျှပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နည်းတူ စဉ်းစားပေးရန် နှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များ ထပ်မံပေးရန်.. သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါလူ့အခွင့်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျှင်းပြီး -(၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး(၂) မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်(၃) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ထံ တရားဝင်စာရေးသားအကြောင်းကြားခွင့်ပေးပါရန်..အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ရှိ အောက်ပါသီးသန့် ၊ သာမန်သီးသန့်အကျဉ်းသားများက တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်----နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများအကျိုးဆောင်ကွန်ယက် မိသားစုနှင့် ပြည်သူလူထုကြီးမှပေးပို့လာသောသတင်းများကိုတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေလိုက်ပါသည်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများအကျိုးဆောင်ကွန်ယက် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ (၉.၄.၂၀၁၂) Posted in:
Why still not sympatizied, digital world and could always listen Dhamma not obliged is very sad human life. Else where show amenities for people we predict the worst need amenities in jails.devastating jails and reform and changed everything. All poc get full recreation and look after new work opportunities.